राशिफल Archives - News 88 Post
जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस असार १२ गते आइतबारकाे राशिफल !
June 25, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस असार १२ गते आइतबारकाे राशिफल !
मेष राशि : धन प्राप्तिमा आउने बाधा हट्नेछ। अदालत र अदालतमा अनुकूलता रहनेछ। पुरानो रोगले समस्या निम्त्याउन सक्छ। बाेल्दा विचार गर्नुहाेला। विवाहको प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्छ। परिवारमा सुख शान्ति छाउनेछ। बेमेलबाट बच्नुहोस्। चिन्ता रहनेछ। वृष राशि : आर्थिक उन्नति हुनेछ। व्यापार राम्रो हुनेछ। लगानी राम्रो रहनेछ । अधिकारीहरू काममा खुसी हुनेछन्। पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ। समय […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस असार ११ गते शनिबारकाे राशिफल !
June 24, 2022 June 24, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस असार ११ गते शनिबारकाे राशिफल !
मेष राशि : टाढाको यात्राको योजना बन्न सक्छ। आफ्नो मनपर्ने खानाको आनन्द लिनुहोस्। वरिष्ठबाट मार्गदर्शन मिल्नेछ । विद्यार्थी वर्गमा सफलता मिल्नेछ। पढाइमा रुचि बढ्नेछ। जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा चिन्ता रहनेछ । स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । अशान्ति रहनेछ। धन आर्जन गर्न सजिलो हुनेछ। वृष राशि : प्रतिद्वन्द्वी बढ्नेछ। पारिवारिक चिन्ता बढ्नेछ। अत्यावश्यक वस्तु समयमै उपलब्ध हुने छैनन् । […]
June 23, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस असार १० गते शुक्रबारकाे राशिफल !
मेष राशि : जीवनसाथीसँग राम्रो समय बित्नेछ। व्यापार बढ्नेछ। काममा शान्ति मिल्नेछ। लगानी लाभदायक हुनेछ। कार्य सम्पन्न हुनेछ। घर बाहिर सुख शान्ति छाउनेछ। मनको अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्नुहोला । कानूनी बाधा हटेर स्थिति अनुकूल हुनेछ। वृष राशि : साझेदारको समयसापेक्ष सहयोग प्राप्त हुनाले खुसी रहनेछ। काममा मातहतका कर्मचारीको सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसाय राम्रै चल्नेछ । […]